Rooble gadaal ka toogashadii uu Kheyre ku sameeyey oo kale armuu farmaajo sameeyaa? - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Rooble gadaal ka toogashadii uu Kheyre ku sameeyey oo kale armuu farmaajo...
Rooble gadaal ka toogashadii uu Kheyre ku sameeyey oo kale armuu farmaajo sameeyaa?
Gundhiga khilaafka Madaxda Soomaalida iyo hakadka doorashada lagu murmay muxuu salka ku hayaa,waa warbixin aan ku dhiran dhirin doono shantii sano lasoo dhaafay iyo hab xukunkii Madaxweyne Farmaajo saameynta ku yeeshay.
Inkastoo Madaxweyne farmaajo uu ku dedaalay in R/wasaare is fahan ka dhaxeeyo ay wada dhameystaan muddo xilleedkiisii balse Xasan Cali Kheyre ayaa seddex sano iyo bar ay isku mabda’ ahaayeen ugu dambeyn kala huleeleen,iyagoo hadda isku arka kuwo cadow siyaasadeed isku ah.
Dadka maxalila siyaasada dalkeena waxay qaarkood rumeysan yihiin in fiilo hoos ka xiriirta heystaan Farmaajo iyo Kheyre oo afka baarkii ay ka tahay isku muujinta xurgufta ka dhex jirta ee warbaahinta laga arkay.
Dooda doorashada ee jiitankeeda soo gaaray sanad iyo bar ka badan waxa lagu micneeyey in raali laga aheyn markii horeba qaabka ay ku bilaabatay.
Dib umilicsi guud aan ka eegno maxay Soomaalida madaxdeeda ku coloobaan kadib markii ay iska waayaan danahooda gaarka ah.
20-kii September 2020-kii ayuu Rooble oo Xilligaasi ahaa R/wasaare Magacaaban mahad celin iyo amaan ku hagoogay Madaxweyne Farmaajo,xilli Golaha shacabka uu ka dalbanayey inay codkooda kalsoonida siiyaan.
Labada Mas’uul waa farmaajo iyo Kheyre Mid waliba waxa uu muujiyey isku kalsoonaan,isku xirnaan siyaasi ah & dhinac laga wada ahaa in doorasho dalka la gaarsiiyo.
Kiiskii Ikraan Tahliil ee bishii September sanadkii hore ayaa soo if bixiyey isku dhicii koobaad oo labada mas’uul hadalo xanaf leh isku weydaarsadeen mareegaha Internet-ka.
Hase ahaatee Khilaafkii bilaha qaatay oo wasiiro iyo saraakiil ciidan sababsadeen in xilka laga xayuubiyo ayaa xal waxaa ka gaaray xiisadaasi Labada dhinac.
Heshiiskaasi garwadeenka uu ka ahaa C/casiis Lafta gareen waxay keentay in xasilooni siyaasadeed dalka galo,balse bambo siyaasadeed uu tuuray isbuuc ka hor bishii hore December waxay mar kale soo if bixisey khilaafka R/wasaare Rooble iyo Madaxweyne farmaajo markii arinta doorashada la isku maan dhaafay.
Dooda ayaa markaan gaartay in mid waliba Labada Mas’uul uu kan kale ku sheego mid aan sharciyad heysan oo dalka wax awood ah ku laheyn.
Fiidsooh la dareemay iminka ayaa muujinaya in Madaxweyne farmaajo uu doonayo sidii uu ku magacaabi lahaa R/wasaare Cusub oo badela Rooble.
Xafiiska Madaxweynaha xogo hoose oo laga helay ayaa warkaan soo dusiyey taas oo sii cusleyn karta xaalada siyaasadeed ee dalka iyo doorashada socotay.
Hadii La magacaabo R/wasaare Cusub sidee ayuu ku aqbali doonaa xil wareejin uu sameeyo maadaama uu Farmaajo ku sheegay Madaxweyne Hore oo la mid ah Murashaxiinta Madaxweynaha xilka raadinaya?
Rooble ma uusan kala wareegin xilka mas’uulkii ka horeeyey markii la magacaabay balse hadda sow ma muuqato in sidii kheyre oo kale loo badeli karo?
Siyaasada Soomaaliya Ee xilligaan ayaa taagan seddex xagal aan la tallaabi karin,iyadoo beesha Caalamka ay tahay marjaca ugu weyn ee go’aanada dalka iyaga laga sugo.
Maah maah soomaaliyeed ayaa oraneysay “Af hadlaaba aamus”.